Maxay tahay sirta ku jirta wareysi uu bixiyay madaxweynaha Masar Abdifatax al-Sisi, oo laga cabsi qabo inuu hawada galo? | Berberanews.com
Home WARARKA Maxay tahay sirta ku jirta wareysi uu bixiyay madaxweynaha Masar Abdifatax al-Sisi,...
Maxay tahay sirta ku jirta wareysi uu bixiyay madaxweynaha Masar Abdifatax al-Sisi, oo laga cabsi qabo inuu hawada galo?
Telefishinka CBS ee uu fadhigiisu yahay waddanka Mareykanka ayaa sheegay inuu ku gacan seyray codsi uga yimid dowladda Masar, oo dooneysa inuusan hawada galin wareysi ay ka qaadeen madaxweynaha Masar Cabdifataax al-Sisi.
Codsigaas ayaa waxaa mas’uuliyiinta Telefishinka gaarsiiyay danjiraha Masar u fadhiya dalka Mareykanka.
Wareysigaas oo 60 daqiiqo soconaya ayaa lagu soo warramay in Mr Sisi uu ku xaqiijiyay wada shaqeynta ka dhaxeysa Ciidamada Masar iyo kuwa Israa’iil, si ay isaga kaashadaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha Jihaad doonka ah ee ku sugan gacanka Sinai.
Waxa uu sidoo kale dafiray in dowladdiisu ay xabsiga ku heyso dad siyaasiyiin ah, wuxuuna difaacay howlgalkii dhimashada badnaa ee lagu wajahay mudaharaadyadii sannadkii 2013-kii.
Mas’uuliyiinta warbaahinta la iska arko ee CBS ayaa sheegay in laga codsaday ineysan wareysigaas hawada ka sii deynin wakhti dhow, laakiin iyagu ay ka dhaga fureysteen dalabkaas.
Ma jirto wax jawaab ah oo ay dowladda Masar ka bixisay wararka soo baxaya ee ku saabsan macluumaadka ku jira wareysiga uu bixiyay madaxweyne Sisi.
Muxuu yiri Madaxweynaha?
Telefishinka CBS ayaan bixinin qormo dhammeystiran oo ku saabsan wareysiga, balse waxay mas’uuliyiintiisa sheegeen in madaxweynaha wax laga weydiiyay howlgalkii ka dhacay Masar, oo billowday markii ciidamada Milatariga oo uu xilligaas hoggaaminayay Sisi ay af gambiyeen xukuumaddii Maxamed Mursi, bishii Luulyo ee sanadkii 2013-kii.
In ka badan 900 oo ruux, oo u badnaa taageerayaasha xisbigii Maxamed Mursi ee Ikhwaanul Muslimiinka, oo hadda mamnuuc ka ah dalkaas, ayaa la dilay, iyadoo ciidamada amaanka ay 14-kii bishii Agoosto ee 2013-kii dadka ka bixiyeen labada fagaare ee kala ah Raabica al-Cadawiya iyo Nahda, oo ku wada yaalla magaalada caasimadda ah ee Qaahira. 120 ruux oo kale ayaa 2 maalmood ka dib ku dhimatay fagaaraha Ramses.
Mr Sisi, oo xilligaas ahaa wasiirka gaashaan dhigga ee Masar, ayaa wareysiga CBS lagu weydiiyay su’aal ku saabsaneyd inuu isaga bixiyay amarkii rasaasta loogu furayay dadkii mudaharaadeyaasha ahaa ee ku sugnaa fagaaraha Raabica al-Cadawiya. Wuxuuna ku jawaabay: “waxaa jiray kumannaan qof oo hubeysan oo ku jiray halkaas muddo ka badan 40 maalmood. Waxaan isku daynay hab kasta oo nabadeed oo aan uga saari karno meeshaas”.
Hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dad kooban ay hubeysnaayeen
CBS ayaa sheegay in madaxweynaha uu sidoo kale “xaqiijiyay in Milatarigiisu ay la shaqeynayeen Israel, si ay uga gacan sarreeyaan kooxaha argagixisada lagu tilmaamay ee ku sugan Waqooyiga gacanka Sinai”, halkaasoo weerarro ay geysanayeen xoogag daacad u ah ururka Daacish ay ku dhinteen boqollaal askari iyo dad shacab ah.
Mar la weydiiyay Mr Sisi in wada shaqeynta dhex martay Israa’iil ay ahayd “tii ugu dhoweyd abid”, ayuu ku cel celiyay : “Waa sax waa sidaas… waxaan Israa’iil la leenahay xiriir wada shaqeyn oo aad u baaxad weyn”.
Previous articleBerbera oo 150 geed laga beeray
Next articleBooliska Somaliland oo qabtay maandooriyayaal kala duwan